Nhau - Kuvandudza Hotera ROI - Kufunga Kunze kweBhokisi kubva Dhizaini kuenda kuKushanda
Seindasitiri pane chikonzero chekuti mahotera agone kushanda. Iyo denda yakatidzidzisa kufungisisa mune ino divi uye nekuvandudza zvinhu zvehotera izvo zvinogona kutyaira yakakwira ROI. Izvo zvinogona chete kuitwa kana isu tichitarisa pakuita shanduko kubva Dhizaini kuenda kune Mashandiro. Sezvineiwo, isu tinofanirwa kuita shanduko kune iyo indasitiri chinzvimbo, kutevedzera mutengo uye mubereko mutengo, zvisinei, sezvo izvi zviri zvemitemo nyaya, isu tisingakwanise kuita zvakawanda isu pachedu. Zvichakadaro, mutengo wekuvaka, mutengo wemashandiro, kureva mari hombe ine chekuita nezvinoshandiswa uye manpower, zvinhu zvinogona kudzorwa nevashambadzi vemuhotera, mabhureki uye zvikwata zvinoshanda zvinobudirira.
Pazasi pane mashoma mazano uye mazano emahotera mune izvi:
Simba rekugadzirisa mari
Vaka zvivakwa zvemagetsi kuti zviwane mabhureki enzvimbo pasina kukanganisa chiitiko kureva kuti vanofanirwa kugona pasi pasi uye kuvhara dzimwe nzvimbo pese pazvisingadiwe kudzikisa mutengo wekutonhora kana nzvimbo dzisiri kushandiswa nezvimwe.
Shandisa mhepo uye simba rezuva pese pazvinokwanisika, nzira yekushandisa yechiedza chezuva, zvinhu zvinojekesa pakuvaka façade kudzikisa kupisa.
Shandisa mapombi ekupisa, LED, nyowani tekinoroji yekudzora kushandiswa kwesimba, kudzokororazve mvura uye kumhanya mashandiro pamutengo wakaderera.
Gadzira Kukohwa Kwemvura Yemvura paunokwanisa kuunganidza mvura.
Tarisa sarudzo dzekugadzira DG seti, STP yakajairika kuvhara nemahotera munzvimbo pazvinogoneka uye nekugovana mutengo.
Kugadzira workflows kugona / zvidiki asi zvinoshanda nzvimbo / muchinjiko-chitima vanobatana neyese seti yunifomu (hapana shanduko muhotera) kuitira kuti vashandi vashandiswe munzvimbo chero ipi.
Kurudzira shanduko manejimendi manejimendi evanoshamwaridzana kuti vakwanise kushanda kuyambuka chimiro chakatwasuka pane kutwasuka chimiro chechimiro.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, mahotera anofanirwa kuenda kumitengo ine simba kune ese makuru mavhoriyamu maakaundi uye kupa dhisikaundi sepesenti kubva paBar rate senge ndege dzendege pane mutengo wakatarwa wekusimudzira mari.